Ku hagaaji kanaalkaaga iyo fiidiyowyada adoo adeegsanaya dhaqanka ugu fiican YouTube ee ugu sarreeya koritaanka dabiiciga adigoon iibsan xayeysiis! Waxaan nahay Google Certified for YouTube Channel Kobaca & ogahay waxa ay u baahan tahay in la sameeyo!
Waan ognahay sida loo sameeyo YouTube!
Khubaradeenna Shahaadada YouTube-ka ah ayaa fulinaya YouTube SEO illaa 2011. Waan ognahay xeeladaha ugu fiican uguna waxtarka badan ee natiijooyinka bixiya. Waxaan si buuxda u qiimeyn doonnaa kanaalkaaga iyo fiidiyowyadaada, ka dib waxaan ku siin doonnaa tilmaamo gaar ah, faahfaahsan oo si fudud loo-raaco si loo wanaajiyo oo loo kala sarreeyo natiijooyinka raadinta. Tani waxay u horseedaa taraafikada daawadayaasha kuwa ugu muhiimsan - kuwa dabiiciga ah.
Qiimeynta Kanaalka YouTube
Qiimeyn fiidiyow ah oo si duuban loo duubay kanaalkaaga YouTube + ayaa falanqeynaya tartamayaashaada + 5-talaabo qorshe hawleed ee talaabooyinkaaga xiga.
Fiidiyowgaaga 45 + Daqiiqo ah waxaa ka mid ah:
Qiimeynta Kanaalka oo Dhameystiran
Talooyin Gaar u ah Channel-kaaga & Fiidiyowyada
Dib u eeg fiidiyowyadaada & Istaraatiijiyadda nuxurkaaga
Sirta Lagu Dhiirrigaliyo Fiidiyowyada & Qaado Subs
Faahfaahin Qorshe Tallaabo 5 Tallaabo Adiga ah
Waqtiga Gaarsiinta: 4 ilaa 7 maalmood
YouTube Fiidiyowga SEO
Qiimeyn buuxda ee fiidiyowgaaga YouTube ah, oo noo oggolaaneysa inaan ku siino Cinwaan + Sharaxaad + 5 keywords / Hashtags.
Adeegga waxaa ka mid ah:
Qiimeyn SEO oo Muuqaal ah oo Dhamaystiran
1 Cinwaan La Kordhiyay Oo La Bixiyay
1 Tilmaanta Kobcinta La Siiyey
5 Erayada la baadhay / Hashtags
Naqshadeynta Sawirka YouTube
Xirfadle, si buuxda dib u naqshadeeyey Banner Channel Channel iyo YouTube Video Thumbnails.
Tayada Naqshadeynta Xirfadeed
Caado u dhiganta Magacaaga
Naqshad Xoog leh & Ka Qaybgal
Cabbirka & Tayada saxda ah ee YouTube
Waxay hagaajineysaa Qiimahaaga-Thru-Rate (CTR)
Waqtiga Gaarsiinta: 1 ilaa 4 maalmood
Dib U Eegista Kanaalka YouTube
Kumaa ah inuu iibsado Qiimeynta Kanaalka YouTube?
Ma waxaad tahay yaraha 'YouTuber' ee u halgamaya kobcinta kanaalkaaga?
Ma waxaad isku dayeysaa inaad hesho aragti dheeri ah laakiin ma hubtid waxaad sameyneyso?
Miyaad wax su'aalo ah ka qabtaa barxadda laakiin ma garanaysid qof aad weydiin karto?
Hadday sidaas tahay, markaa adeeggayaga Qiimeynta Kanaalka YouTube adiga ayaa adiga ah.
Khubaradeenu waa adiga YouTubers laftooda, kuwaas oo haysta malaayiin aragti YouTube ah, oo ku dhow 1 milyan oo macaamiil ah waxayna abuurayaan fiidiyoow sanado badan.
Khubaradayada ayaa garanaya YouTube-ka gudaha waxayna kula wadaagi doonaan aqoontooda maaddaama ay sifiican dib ugu eegaan kanaalkaaga YouTube-ka fiidiyaha.
Maxaad isiin doontaa kadib markaan iibsado adeegan?
Waxaan ka sameyn doonaa fiidiyoow 45+ daqiiqo ah annaga oo si fiican u dhex soconna oo qiimeynna kanaalkaaga YouTube. Ka dib, waxaan u soo gelineynaa YouTube-ka, fiidiyowga ayaan ka dhigeynaa mid gaar ah (adiga kaliya) waxaana kuu soo diri doonnaa xiriiriye si aad u daawan karto qiimeyntaada markasta oo aad firaaqo hesho!
Maxaa si ku-meel-gaadh ah ugu jira Qiimaynta Kanaalka?
1) Waan fiirin doonaa fiidiyowyadaada waxaanan ku siin doonnaa dhaliil wax dhisaysa.
2) Talooyin ku saabsan sida aad uga dhigi karto fiidiyowyadaada kuwo ka fiican sidii loo kordhin lahaa waqtiga daawashada iyo haynta dhagaystayaasha.
3) Waxaan dib u eegi doonaa cinwaanadaada iyo thumbnails, istiraatiijiyadda waxyaabaha ku jira, ereyada muhiimka ah iyo sharraxaadda, bogga hore iwm.
4) Waxaan la wadaagi doonnaa sirteenna ku saabsan sida loo horumariyo fiidiyowyadaada loona helo macaamiil.
5) Waxaan falanqeyn doonaa tartamayaashaada waxaanan kuu sheegi doonaa sida aad uga fiicnaan laheyd iyaga.
6) 5-Tallaabo Qorshe Hawleed!
Ma u baahan tahay aqoonsigayga gelitaanka kanaalka YouTube?
Maya, uma baahnin aqoonsigaaga soo galitaanka. Ma galno kanaalkaaga YouTube.
Waxaan ku siineynaa fiidiyoow 45 + daqiiqo ah oo naga mid ah oo si fiican u qiimeynaya kanaalkaaga waxaadna hirgelin kartaa fikradaha / isbeddelada aan kugula talinayno sida kuugu habboon.
Ma ku shaqeyn kartaa nooc kasta oo kanaal YouTube ah?
Haa! Waxaan la shaqeynaa nooc kasta oo kanaal YouTube ah waxaanan kaa caawin karnaa inaad kobciso taada, iyada oo aan loo eegin nooc kasta oo ay ka kooban tahay waxyaabahaagu.
Miyaad siin kartaa qiimeyn channel ah Kanaallada YouTube-ka ee aan Ingiriisiga ahayn?
Haa! Waxaan dib u eegi doonnaa kanaalkaaga fiidiyowga oo waxaan kuhadleynaa Ingiriisiga, laakiin waxaan kuugu soo bandhigi doonaa cinwaanno turjumaad ah luuqadda aad doorbideyso.
Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku daawato fiidiyowga, adoo akhrinaya qoraallada hoose si loo hubiyo inaad fahamsan tahay wax walba oo aan dhahayno.
Barnaamijka tarjumaadda ee aan adeegsanno waa mid aad u fiican oo wuxuu qaban doonaa shaqo aad u wanaagsan oo ah tarjumaadda luqadda aad doorbideyso Waxaad si buuxda u fahmi doontaa waxa aan ku iri qiimeyntaada.
Miyaad Ku Bixin Kartaa Adeegyadan Channel-yada YouTube-ka ee Aan Ingiriisiga Ahayn?
Mudo intee le'eg ayaad iska qori doontaa adiga oo qiimeynaya kanaalkayga?
Fiidiyowga aad naga heli doontid wuxuu dhererkiisu noqon doonaa 45+ daqiiqo oo ay ka buuxdo aragti qiimo leh kanaalkaaga YouTube.
Ka dib markaad amarkaaga dhigato, waxay caadi ahaan nagu qaadataa 3-7 maalmood si aan u dhammaystirno Qiimeynta Kanaalkaaga.
YouTube Video SEO Su'aalo
Sidee Cinwaanada, Sharaxaada iyo Erayada Muhiimka ah / Hashtags loo Hormarin karaa Caawinta Kobcinta Kanaalkayga?
Waxaan u adeegsannaa isku-darka hab-dhaqanka ugu fiican iyo aaladaha cilmi-baarista ee aasaasiga ah si aan kuu siino Cinwaan, Sharaxaad iyo ereyo-fure / Hashtags oo kaa caawin doona inaad si wanaagsan u darajo yeelatid, u ekaatid qof xirfad-yaqaan ah oo aad u kordhiso fiidiyahaaga riix-ku-celis (CTR).
Ma u Baahan Tahay Aqoonsigeyga Soo Galitaanka Kanaalkayga YouTube?
Maya, uma baahnin aqoonsigaaga soo galitaanka. Ma galno kanaalkaaga YouTube. Taabadalkeed, waxaan ku siineynaa dukumiinti faahfaahsan oo si fudud loo fahmi karo si aad adigu u dhaqan galiso soo jeedimaha gaarka ah. Way fududahay waxaadna jeceshahay inaad hirgaliso isbeddeladaada adigu, maxaa yeelay waxay kaa caawin doontaa inaad waxbarto oo aad u korto sidii YouTuber.
Ma Ku Shaqeyn Kartaa Nooc Kasta Oo YouTube Channel ah?
Haa iyo Maya Aynu sharaxno tongue Afkeenna hooyo waa Ingiriis. Maaddaama aan dooneyno inaan ku siino adeegga ugu fiican ee tayada ugu macquulsan, nasiib darro kuma siin karno dib-u-eegistayada SEO ee luqad kale.
Si kastaba ha noqotee… waxaan kugu gaarsiin karnaa adeegyadeena af Ingiriis, ka dibna waxaad u isticmaali kartaa Google Translate inaad ugu beddesho luqaddaada. Google Translate waxay qabataa shaqo aad u fiican oo turjumaad ah, markaa waxaad awood u yeelan doontaa inaad si weyn uga faa'iideysato adeegyadan, xitaa haddii kanaalkaagu uu ku jiro luqad kale.
Muddo intee le'eg ayuu qaadan doonaa howsha oo dhan?
Way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku saleysan yoolalkaaga. Guud ahaan, ka dib markaad hirgeliso talooyinkayaga, waxaad arki doontaa koritaan gaabis ah inta lagu jiro bisha ugu horreysa sababtoo ah YouTube ma cusbooneysiiyo natiijooyinka isla markiiba. Kadib, bilaha socda, xawaaraha ayaa kor uqaadi doona oo siiwadi doona bil-bil-bil kadib. Waxay u egtahay gaari xamuul ah… natiijooyinka tartiib tartiib ayey u bilaaban doonaan, laakiin markey xawaaruhu kugu soo socdaan, xawaare buuxa ayaa kaa horeeya! Natiijooyinkani waxay u maleynayaan inaad dhaqan-gelisay soo-jeedimadeenna sidoo kalena waxaad soo dhejineysaa waxyaabo tayo leh. Iyadoo aan loo eegin tayada nuxurka, adeegyadeennu way caawin doonaan, laakiin tayada sare ee ay ka kooban tahay, ayaa ka sii wanaagsan natiijooyinka aad arki doonto ka dib markaad hirgeliso soo-jeedimahayaga.
Naqshadeynta Sawirka YouTube-ka FAQ
Sidee Banner Channel wanaajiyay & thumbnails Video gacan ka geysan kartaa kobcinta My Channel?
Dareenka ugu horreeya ayaa si aad ah muhiim ugu ah adduunka internetka. Haddii qof soo booqdo kanaalkaaga oo aanu arkin boodh iyo muuqaal yar oo fiidiyoow ah oo soo jiita dareenkooda, si dhakhso leh ayey u riixi doonaan badhanka dambe. Adeeggeena xirfadeed ee qaabeynta ayaa dhoola cadeynaya wejigaaga marka aad soo dejineysid shaxanka oo aad aragto horuumarintaada, xirfaddaada “dukaamanka”.
Sidee Muhiim U Tahay In La Sameeyo Sawirro Fiidiyowyo Xirfad Leh?
Hadaad fiiriso, waxaad arki doontaa in dhamaan YouTubers-yada waaweyni ay isticmaalayaan thumbnails fiidiyowyo caado ah si ay fiidiyooyinkoodu u soo baxaan oo ay u helaan qasabno badan. Tayada, thumbnails-ka caadada ahi waxay fiidiyowgaaga ka dhex muuqdaan fiidiyowyada laga yaabo inay leeyihiin aragtiyo badan ama ka caansan kuwaaga. Xitaa haddii fiidiyowgaagu ka hooseeyo natiijooyinka raadinta, thumbnail khaas ah ayaa soo jiidan doona dareenkooda sidaas darteedna waxay ku dhiirrigelinayaan inay soo booqdaan fiidiyahaaga.
Xusuus-qorka khaaska ahi wuxuu kaloo kaa caawinayaa hagaajinta qiimeyntaada YouTube iyo Google, sidaas darteed adiga ayaa kuu abuuraya taraafikado badan oo dabiici ah.
Maya, uma baahnin aqoonsigaaga soo gal. Ma galno kanaalkaaga YouTube. Taabadalkeed, waxaan ku siineynaa sawirada si aad adigu ubucdo adigu. Way fududahay oo waxaad jeclaan doontaa inaad isbeddeladaada sameyso, maxaa yeelay waxay kaa caawin doontaa inaad waxbarto oo aad u korto sidii YouTuber.
Haa! Waxaan u qaabeyn karnaa naqshadeynta nooc kasta oo kanaal YouTube ah, iyadoon loo eegin waxa nuxurkaagu ka kooban yahay.
Kawaran Hadaanan Jecleyn Naqshadeynta, Ama Aan Doonayo Isbadalo?
Si fudud nala soo xiriir, sharax waxa aad jeceshahay inaad aragto in wax laga badalay waxaanan sameyn doonaa dib u eegis! Ugudambeyn, waxaan rabnaa inaad jeclaato sawirada aad hesho oo aad ku dhajiso kanaalkaaga YouTube.
Way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku saleysan yoolalkaaga. Guud ahaan, ka dib markaad hirgeliso sawiradeena, waxaad arki doontaa koritaan gaabis ah inta lagu jiro bisha ugu horreysa sababtoo ah YouTube ma cusbooneysiiyo natiijooyinka isla markiiba. Kadib, bilaha socda, xawaaraha ayaa kor uqaadi doona oo siiwadi doona bil-bil-bil kadib. Waxay u egtahay gaari xamuul ah… natiijooyinka tartiib tartiib ayey u bilaaban doonaan, laakiin markey xawaaruhu kugu soo socdaan, xawaare buuxa ayaa kaa horeeya! Natiijooyinkaani waxay u maleynayaan inaad hirgelisay muuqaalkeena isla markaana waxaad sidoo kale soo dhejineysaa waxyaabo tayo leh. Iyadoo aan loo eegin tayada nuxurka, adeegyadeennu way caawin doonaan, laakiin tayada sare ee ay ka kooban tahay, ayaa ka sii wanaagsan natiijooyinka aad arki doonto ka dib markii aad hirgelisay muuqaalladayada.
Sida Loo Qabto Kalfadhi AMA ah oo soo jiidasho leh YouTube-ka?